मार्क्सका विचारहरूको बहुआयामिक प्रभाव- विचार - कान्तिपुर समाचार
पुस १८, २०७३ प्रदीप ज्ञवाली
बीबीसीले सन् २००० मा गरेको विश्वव्यापी जनमत सर्वेक्षणमा कार्लमार्क्सको नाम दोस्रो सहस्राव्दीमा विश्वलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने दार्शनिकका रूपमा घोषित भयो । ‘सहस्राब्दी नायक’को रूपमा मार्क्सको चयन एकदमै स्वाभाविक र अपेक्षित थियो, किनभने समकालीन विश्व र मानव जीवनमा मार्क्सका विचारहरूको जत्तिको गहिरो प्रभाव अरू कसैको छैन । मार्क्स एउटा यस्तो सीमास्तम्भ हुन्, जहाँबाट नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ ।
मार्क्स अद्वितीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री र राजनीतिक सिद्धान्तकार थिए । प्रकृति, समाज र मानवीय चेतनाका चालक नियमहरूको अन्वेषण र संश्लेषण गरेर उनले प्रतिपादन गरेको द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद, पुँजीवादी शोषणको सूक्ष्म र मिहीन विश्लेषण गर्दै उनले आविष्कार गरेको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त तथा श्रमजीवी वर्गको सङ्घर्षको लक्ष्य एवं अनिवार्य भविष्यका रूपमा रेखाङ्कित गरेको वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्त यस युगका सर्वाधिक मूल्यवान बौद्धिक सम्पदाहरू हुन् । प्रयोगका ढाँचामा भएका कमी र अनुयायीहरूका गल्तीहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर मार्क्सका विचारहरूको वैज्ञानिकता र सहीपना भने उत्तिकै सान्दर्भिक छ । दर्शन, अर्थशास्त्र र राजनीतिलाई मार्क्सवादका मुख्य सङ्घटक अङ्ग मानिन्छ, तर मानव जीवनमा मार्क्सको प्रभाव भने निकै विस्तृत, बहुआयामिक र गहन छ । मार्क्सवादबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित नभएको सम्भवत: जीवनको कुनै पाटो या कोण छैन ।
मार्क्सको सबैभन्दा ठूलो योगदान हो– उनले संसारभरका श्रमजीवीहरूलाई बाँच्ने आशा जगाए र विभेदकारी समाजका ठाउँमा अर्को न्यायपूर्ण, समान र समृद्ध संसार निर्माण गर्नु सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाए । मार्क्सले देखाएको समाजवादी सपना पूर्ववर्ती सन्त–चिन्तकहरू, समाज–सुधारक या विद्रोहीहरूले सोचेको आदर्श समाजभन्दा के मानेमा भिन्न थियो भने यो कुनै स्वैरकल्पना थिएन । यो समाज विज्ञानका वस्तुनिष्ठ नियमहरूको सघन अध्ययनमाथि आधारित वैज्ञानिक र व्यावहारिक निष्कर्ष थियो । उनले न्यायका लागि सङ्घर्षरत करोडौं श्रमजीवीहरूलाई मुक्ति र समानताको वैचारिक अश्त्र प्रदान गरे । यो वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त नगरुन्जेल श्रमजीवी वर्गको आन्दोलन मेसिन–भञ्जन या ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता दायरामा सीमित थियो ।
मार्क्स यताको अवधिमा श्रमजीवी वर्गले के पायो ? निष्कर्षमा एकरूपता नहुन सक्छ । तर पनि ‘वर्ग स्वयं’बाट ‘वर्ग आफ्ना निम्ति’मा रूपान्तरण, अधिकार र समानताका लागि सचेत र बलिदानी सङ्घर्षहरूको संयोजन, श्रमजीवी वर्गका मुद्दाहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सुधारका लागि पुँजीवादमाथि दबाब र कतिपय मुलुकमा समाजवादी सत्ताहरूको स्थापना यस बीचका उल्लेखनीय उपलब्धि हुन् । चीन लगायत केही मुलुक प्रतिकूलतालाई चिर्दै समाजवादको दिशामा अग्रसर भए पनि कुनै बेला संसारको एक तिहाइभन्दा बढी भूभाग ओगटेजस्तो समाजवादी विश्व शिविर भने अहिले विद्यमान छैन । समाजवाद रक्षात्मक अवस्थामा छ । तर मार्क्सले अगाडि सारेका एजेन्डालाई अस्वीकार गर्न भने स्वयं पुँजीवादलाई पनि सहज छैन । मार्क्सका विचारहरूको हस्तक्षेपसँगै पुँजीवादले कृत्रिम रूपमा भए पनि मानवीय चेहरा भिर्न बाध्य भएको छ ।
पुँजीको अत्यधिक केन्द्रीकरण पुँजीवादको विशेषता र असाध्य अन्तरविरोध पनि हो । आज सबैभन्दा धनी १ प्रतिशतका हातमा बाँकी सबै मान्छेको भन्दा बढी सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भएको अक्सफामबाट उद्घाटित यथार्थ, आर्थिक विषमताको गहिरिँदो खाडल, बेरोजगारी, गरिबी, अभाव र द्वन्द्व, आतङ्कवादको बढ्दो चुनौती र पर्यावरणीय विनाशका कारण आज विश्व वित्तीय पुँजीवाद गहिरो सङ्कटमा छ । तर ऊ आफ्नो सङ्कटको व्ययभार आम जनताको शिरमाथि थोपरेर मितव्ययिता र खर्च कटौतीका नाममा जनताका सुविधाहरू हटाउँदैछ र करार श्रम, ‘आउट सोर्सिङ’ र अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तारजस्ता नयाँ शोषणहरूद्वारा श्रमिक वर्गलाई आक्रान्त गर्दैछ । यसले समाजमा आक्रोश पैदा गरिरहेको छ । ९० को दशकमा चर्को स्वरमा घोषणा गरिएको ‘नवउदारवादको अन्तिम विजय’ र ‘समाजवादको मृत्यु’का घोषणाहरू खोक्रो भएका छन् । समाजवादको खोजी व्यग्रतापूर्वक हुनथालेको छ ।
तर समाजवादको पुनर्परिभाषा र त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटोको नयाँ अन्वेषण नगरी समाजवादको विजय सम्भव छैन । विगतमा सर्वहारा अधिनायकत्व नामको एकदलीय प्रणाली, लोकतन्त्रको अवमूल्यन, कम्युन अर्थतन्त्र र समाजवाद प्राप्तिको हिंसात्मक बाटो अब असान्दर्भिक भएका छन् । रूसी नेता गेन्नादी जुगानेभले भनेजस्तो अब समाजवादतिर ‘फर्किने’ होइन, समाजवादतिर ‘अगाडि बढ्नु’पर्छ ।
मार्क्सले द्वन्द्व र गतिका नियमहरूको अन्वेषण गर्दै संसारलाई हेर्ने र बुझ्ने नयाँ विश्व दृष्टिकोण विकास गरे । त्यसपछि नै आकस्मिकता र व्यक्तिको शौर्यमाथि आधारित जस्ता लाग्ने समाजका गति व्यवस्थित, शृङ्खलाबद्ध र वस्तुवादी देखिन थाल्यो । विगत डेढ सय वर्षमा भएका क्वान्टम भौतिकी, क्वार्क र हिग्स बोसनको खोजी, अन्तरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक इञ्जिनियरिङ र अन्य धेरै वैज्ञानिक अन्वेषणहरूले मार्क्सले भनेजस्तै संसार ज्ञेय छ, पदार्थ र मानव चेतनाभित्र द्वन्द्वात्मक गति छ, यी नित्य परिवर्तनशील छन् तथा जीवन र जगतमा पुराना समाप्त हुँदै जानु र नित्य नयाँ सिर्जना हुँदै जानु शाश्वत नियम हो भन्ने मान्यताहरू पुनर्पुष्टि हुँदै गएका छन् । नियतिवाद, भाग्यवाद र पराभौतिक चिन्तनहरू खण्डित हुँदै गएका छन् ।
मार्क्सको स्वतन्त्रताको उद्घोषले संसारका उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई स्वाधीनता र राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनमा उत्रिन अभिप्रेरित गर्यो् । आज उपनिवेशवाद विधिवत् अन्त्य भएको छ । निसन्देह, नवऔपनिवेशिक शोषणहरू विद्यमान छन् र साना राष्ट्रहरूको स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रताको लडाइँ टुङ्गिएको छैन । तर शक्तिशाली राष्ट्रहरूले हिजोजस्तै एकलौटी गर्नसक्ने अवस्था भने अब विद्यमान छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता मञ्चहरू खडा भएका छन्, जसले समस्त सीमाहरूका बाबजुद उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई स्थान दिने र उनीहरूका पक्षमा प्रस्तावहरू पारित गर्ने गरिरहेका छन् ।
मार्क्सका विचारहरूले अत्यधिक ठूलो प्रभाव पारेको क्षेत्र हो– साहित्य, कला र संस्कृति । कुनै बेला शासक वर्गको सेवामा प्रयोग भइरहेको संस्कृति र सिर्जना आज धेरै ठाउँमा विद्रोहको औजार बनिरहेको छ । साहित्यमा श्रमजीवी वर्ग, महिला, दलित र सीमान्तकृतहरूको आवाजहरू मुखर बनिरहेका छन् । तिनीहरूमा मुक्ति र स्वतन्त्रताका, सुखद भविष्य र समृद्धिका सपनाहरू प्रतिविम्बित भइरहेका छन् । निश्चय नै प्रतिधु्रव्रीय संस्कृति पनि उत्तिकै क्रियाशील छ र सांस्कृतिक साम्राज्यवादका रूपमा यसले उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद र नैतिक पतनका मूल्यहरूलाई आक्रामक ढङ्गले पस्किइरहेको छ । तर यस विरुद्धको आवाज सशक्त प्रतिरोधसहित उपस्थित छ ।
मार्क्स नै ती अग्रणी चिन्तक हुन्, जसले महिलाहरूलाई चुलोचौकोबाट बाहिर निकालेर सामाजिक जीवनमा आबद्ध गर्नुपर्ने र महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दिशाबोध गरे । त्यसयता विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरूमा अभूतपूर्व जागरण र चेतना निर्माण भएको छ र महिला अधिकार स्थापित भएका छन् । हजारौं वर्ष अगाडिदेखि सुरु पितृसत्ताका बहुआयामिक बर्चस्व अन्त्य गर्ने लडाइँ सजिलै टुङ्गिनेछैन । तर मार्क्सका विचारहरूबाट प्रेरित नारीवादको उभार र प्राप्त अधिकार भने चानेचुने छैन ।
मानव अधिकारको विषयलाई आज विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त छ । विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार्न बाध्य पार्ने पक्ष भनेको मार्क्स–अभिप्रेरित आन्दोलन नै हो । प्रयोगका कतिपय गल्तीले मार्क्सवादको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । तर व्यक्तिको स्वतन्त्रता नै समाजको स्वतन्त्रताको पूर्वसर्त हो भन्ने उनको उद्घोष र व्यक्तिको महत्ता र गरिमाप्रति उनको उच्च प्राथमिकता यसका प्रेरणा स्रोतका रूपमा रहेका छन् । महिला अधिकार, युवा सरोकार, आदिवासी मुद्दा, किसान आन्दोलन, ट्र्ेड युनियन अभियान र अरू धेरै आन्दोलन यसकै प्रेरणाबाट अगाडि बढिरहेका छन् ।
वातावरणीय विनाश गम्भीर सङ्कटका रूपमा खडा छ । भोलिको पुस्तालाई सुरक्षित पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ । वातावरणीय विनाशको मुख्य कारक पुँजीवाद हो, जसका लागि मुनाफा दिने कुनै पनि काम अनैतिक, अपवित्र र अस्पृश्य छैन । मार्क्सले यसको सङ्केत डेढ सय वर्ष अगाडि नै गरिसकेका थिए । उनले उत्पादनका साधनहरू लगायत प्राकृतिक साधनस्रोतमा श्रमजीवी वर्गको अधिकार र उत्पादनमा न्यायोचित वितरणको आवश्यकतामाथि पटक–पटक जोड दिएका थिए । मानव जीवनका प्राय: सबै आयाममा मार्क्सका विचारहरूको प्रभाव छ । मण्डेला, नेहरू, बीपी कोइराला, आइन्स्टाइन, सुकार्नोजस्ता गैर– कम्युनिष्ट नेता, वैज्ञानिक र अभियन्ताहरूमा परेको उनको गहिरो प्रभाव आफैमा अर्थपूर्ण छ ।
तर प्रभावका तुलनामा परिणाम भने अपेक्षाकृत सशक्त हुनसकेका छैनन् । प्राप्त उपलब्धिसमेत गुमेका छन् । यसका पछाडि धेरै कारणहरू हुनसक्छन् । तर मार्क्सका विचारहरूलाई समाजलाई अध्ययन, विश्लेषण र रूपान्तरण गर्ने पद्धतिका रूपमा होइन, सूत्रका रूपमा अनुशरण गरिनु, निश्चित मुलुकका विशिष्ट प्रयोगलाई सार्वभौम सत्य मानेर पछ्याइनु र बदलिंँदो परिस्थिति अनुरूप यसलाई सिर्जनात्मक विकास गर्दै विज्ञानका रूपमा अवलम्बन गर्न नसकिनुलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याउन सकिन्छ । बुद्धले आजीवन रुढी र मूर्तिपूजाको विरोध गरे, तर मृत्योपरान्त उनकै नाममा धेरै पन्थ बने र धेरै मूर्ति निर्माण भए । मार्क्सले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्यो्– उनले अध्ययन पद्धतिमा जोड दिए, तर कतिपय अनुयायीहरूले चाहिंँ उनको भनाइहरूलाई जडसूत्रका रूपमा अपव्याख्या गरे । यस्तै प्रवृत्तिबाट आजित भएर होला सायद, मार्क्सले एकपटक भनेका थिए– म मार्क्सवादी होइन !
समाजवाद गन्तव्य र यात्राको द्वन्द्वात्मक समष्टि हो । यात्रारत रहँदा गन्तव्य बिर्सने र गन्तव्यका सपनाहरू देखिरहँदा आज गर्नुपर्ने कठिन यात्रालाई बेवास्ता गर्ने गल्ती क्षमायोग्य छैन । समाजवाद कुनै ‘सुन्दर बिहानी’मा अचानक प्रकट हुने उपलब्धि होइन, यो त पाइला–पाइलामा निर्माण गर्दै, हुर्काउँदै अगाडि बढ्ने विषय हो । मार्क्सका विचारलाई विज्ञानका रूपमा ग्रहण गरेर तथा तिनलाई समस्या पर्गेल्ने पद्धतिका रूपमा स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने समाजवादको प्राप्ति अवश्यम्भावी छ ।
समाजवाद रक्षात्मक अवस्थामा छ । तर मार्क्सले अगाडि सारेका एजेन्डालाई अस्वीकार गर्न भने स्वयं पुँजीवादलाई पनि सहज छैन । मार्क्सका विचारहरूको हस्तक्षेपसँगै पुँजीवादले कृत्रिम रूपमा भए पनि मानवीय चेहरा भिर्न बाध्य भएको छ ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७३ ०८:३३
पुस १८, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
रौतहट — पिप्राभगवानपुर १ को इद्रिस गेट नजिक मोटरसाइकलको ठक्करबाट आइतबार एक वृद्धको मृत्यु भएको छ ।
रौतहट (कास)– गौरबाट जिंगडवातर्फ जाँदै गरेको बीआर ३० एम २३६४ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलले पैदल हिँडिरहेका ६५ वर्षीय मुखलाल ठाकुरलाई ठक्कर दिएको डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारीले बताए । हात, खुट्टा, टाउकामा गम्भीर चोट लागेका घाइते ठाकुरको उपचारका क्रममा गौर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
६ सय गोठ निर्माण
हेटांैडा (कास)– भूकम्पपीडितले पशुवस्तुका लागि नयाँ गोठ र खोर पाएका छन् । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय र फरवार्ड नेपालको सहयोगमा भूकम्पले भत्केका गोठ र खोर पुनर्निर्माण गरिएका हुन् । भंैसे, नामटार, आग्रा र टिस्टुङमा गरी ६ सय वटा गोठ/खोरहरू निर्माण गरिएका छन् । यहाँका किसान १९ महिनादेखि खुला आकाशमुनि पशुवस्तु पाल्दै आएका थिए । ‘भूकम्पीडित घर धनीहरू टहरामा बसिरहेका भए पनि चौपायाहरू भने गोठ र खोरमा बस्न पाएका छन्,’ जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख रामप्रकाश प्रधानले भने, ‘भूकम्पले जिल्लाका झन्डै १० हजार गोठ र खोर भत्केका थिए ।’
युवा संघद्वारा कारबाहीको माग
बाँके (कास)– केन्द्रीय सदस्य सन्तोष बुढाथोकीमाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई तीन दिनसम्म पनि पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै युवा संघ बाँकेले प्रहरी प्रशासनमाथि आक्रोश पोखेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गर्न संघले माग गरेको हो । युवा संघ बाँकेका सचिव कुसमेखर बस्यालले भने, ‘प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बने कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने छौँ ।’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीलाल पन्थले ज्ञापनपत्र बुझदै एक साताभित्रै अपराधीलाई पक्राउ गर्ने आश्वासन दिए । बुढाथोकीमाथि बिहीबार राति करिब पौने ९ बजे लक्ष्मण मल्लले खुकुरी प्रहार गरी हत्या प्रयास गरेका थिए । बुढाथोकीको भारतको लखनउमा उपचार भइरहेको छ । शल्यक्रियापछि उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ ।
‘संविधान धरापमा पर्न सक्छ’
महेन्द्रनगर (कास)– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन नभए संविधान नै धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले त्यसो भए मुलुक ठूलो अन्योल र अस्थिरतामा फस्ने बताए । ‘यतिबेला मुलुक संकटैसंकटको चक्रव्यूहमा फसेको छ,’ आइतबार महेन्द्रनगरमा दुवै राप्रपा एकीकरण सन्देश दिन आयोजित सभामा उनले भने, ‘मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न राप्रपा वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनतासमक्ष पुगेको छ ।’ उनले वर्तमान संविधान जारी भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाले अन्योल र अस्थिरता उत्पन्न भएको बताए ।
‘संशोधन पारित हुँदैन’
दाङ (कास)– माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नहुने बताएका छन् । मालिका कालिका यातायात प्रालिको पहिलो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रस्तावलाई संसद्ले अस्वीकृत गर्ने बताए । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव सरकार र मधेसमा आन्दोलनरत पक्षको नभएको दाबी गर्दै रायमाझीले उक्त प्रस्ताव अदृश्य शक्तिबाट आएको आरोप लगाए । संविधान संशोधनको पक्ष/विपक्षमा मतदान भए आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
डोल्पा (कास)– जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पा र मातहतका स्वास्थ्यचौकीमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सर्वसाधारणले उपचारमा समस्या बेहोर्नुपरेको छ । जिल्लामा २३ स्वास्थ्यचौकी भए पनि प्रत्येकमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा २३ जना हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दीमध्ये १८ स्थान रिक्त छ । ४८ जनाको दरबन्दी भए पनि अहेबमा ३१ रिक्त छन् ।
४८ अनमीमध्ये २९ स्थानमा दरबन्दी खाली रहेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. श्रीकान्त अग्रवालले बताए । जिल्लामा दुई जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि हाल एक मात्र उपलब्ध छन् ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७३ ०८:३१